प्रभातकालीन दृश्यहरु (संस्मरण) | चितवन पोष्ट
प्रभातकालीन दृश्यहरु (संस्मरण)
कमरेड माला (कथा)
आममान्छे (आजको कविता)
अधिकार (लघु कथा)
प्रातः ९ बजे जीवनसंगिनीको साथ प्रभातफेरीमा निस्किएँ । स्वान नदीलाई दायाँ पार्दै रोडरोडै २ किमी परसम्म पुग्यौँ । नदीकिनारको रमणीय प्राकृतिक वातावरणलाई होचो तारबारले छेकिएको र कतैकतै मात्र नदीमा पुग्ने बाटो छाडिएको छ । साइकल र पैदलयात्राको लागिमात्र बनाइएको नदीकिनारको सडक रहेछ यो ।
‘रिभर बैंक’ नामकरण भएकोे साइन बोर्ड थियो त्यहाँ । प्राकृतिक वनस्पतिलाई संरक्षण गरिएको नदीकिनारको यो भू–क्षेत्र खासगरी पक्षीहरुको बासस्थान र क्रीडास्थल रहेछ । नदीकिनारको बालुवामा बिहानीको कलिलो घाममा पार तापिरहेका फरक–फरक जातका थुप्रै पक्षीहरु देखिए । रातो ठँुड र लामो घाँटी भएका झन्डै बोकाजत्रा अजङ्गका कालो रङ्गका पानीहाँसहरु, सारसको भन्दा केही छोटा घाँटी, मोटो र लामो ठुँड भएका ठूला सेता कुखुराजत्रा काला पक्षीहरु, डाङ्ग्रेजस्ता ससाना पक्षीहरु र अन्य विभिन्न जातका (नाम अज्ञात) पक्षीहरु नदीकिनारमा बाक्लै भेटिए । एक ठाउँमा त नदीकिनारमा पातहरु झरिसकेका, हाँगाबिँगा जिङ्रिङ्ग परेका सुकेका २ वटा रुखहरु नजिक नजिक थिए । त्यो रुखको हाँगाभरि झपक्क पूmल फुलेझैें गरी चराहरु छपक्कै बसेर पार तापिरहेका थिए । अनि, अर्को एक ठाउँमा काला र अग्ला हाँसका बथान नै नदीकिनारको बालुवामा खेलिरहेका थिए । ज्यादै चित्ताकर्षक त्यो दृश्य क्यामेरामा कैद गरेँ र फेसबुकमा राखिदिएँ । धेरैले मन पराए ।
१९ सेप्टेम्बरमा पनि विद्या र म मर्निङ वाकमा निस्कियौँ । फ्रि वे क्रसिङको आकासे पुल पार ग¥यौँ । हिंजो सोही स्थानबाट स्वान नदीलाई दायाँ पारेर मर्निङ वाक गरेका थियौँ । आज बायाँ पार्दै मर्निङ वाक ग¥यौँ । हिजोको तुलनामा आज साइक्लिङ गर्नेहरु धेरै देखिए । शनिबार परेकोले होला भन्ने अनुमान लगाएँं । हिँड्दै गर्दा बिरामीलाई सुताएर गुडाउने स्टे«चरझैँ लाग्ने २ फिटजति अग्लो र ७ फुटजति लामो १ दर्जनजति ३ पाङ्ग्रे साइकल देखियो । जुन साइकल चालकहरुले सुतेर नै चलाएका थिए, त्यो पनि खुट्टाले होइन हातले पाइडल घुमाएर । मैले पहिलोपटक अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको हुँ यस्तो फरक प्रकारको, फरक स्वादको रमाइलो साइकल यात्रा ।
किनारकिनारै अगाडि जाँदै गर्दा हामी मोटर बोटिङ गर्ने ठाउँमा पुगेछौँ । जलक्रीडा गर्नेहरु खचाखच थिए । खासगरी, महिला–पुरूष जोडीहरु । मोटर बोटिङमा आउनेहरुका निम्ति कार पार्किङ, शौचालय, आराम कुर्सी, खुल्ला चौर, विभिन्न प्रकारका फूलका बगैँचा र हरियाली वृक्षहरु भएको सुन्दर पार्क रहेछ त्यो । नितान्त नवीन स्थान, फरक अनुभूति र अनुभव थपियो अलिकति ।
२० सेप्टेम्बर प्रातः श्रीमती विद्या, म र छोरी ममता मर्निङ वाकमा निस्कियौँ । विद्याले आज ‘फेरी’ (स्टिमर) तर्ने ठाउँतिर जाऊँ भन्दै थिइन् । मैले भनेँ– ‘फेरीतर्फ त हामीले पटकपटक घुमिसकेका छौँ । नदेखेको नयाँ–नयाँ ठाउँमा पो जानुपर्छ । आज अर्कै ठाउँमा मर्निङ वाक गरौँ ।’
विद्या– ‘हुन्छ । कता हो तपाईले भन्नुभएको नयाँ ठाउँ ?’
म– ‘मेरो पछाडि पछाडि आऊ न, थाहा भैहाल्छ नि । ठाउँको नाउँ मलाई थाहा छैन, अनि कहाँ भनेर भनौँ ?’
विद्या– ‘ल ल हुन्छ, तपाईं अगाडि लाग्नुस् हामी आमाछोरी पछिपछि आउँछौँ ।’
आज बिल्कुल नयाँ बाटो लागेका छौँ । म पर्थ आएपछि त्यो बाटो हिँड्न धेरैपटक मन लागेको थियो । अनुकूल मिलेको थिएन हिंजोसम्म । आज अनुकूल मिल्यो । दक्षिणी पर्थको चिडियाखानाबाट पश्चिमतर्फ रहेको गल्फ मैदानलाई १ चक्कर मार्ने सोचले अगाडि बढेँ । प्रस्थान समयमा मौसम खुलेको थियो । तर, १०–१५ मिनेटमै मौसम बदलिँदै गयो । गल्फ मैदानको पश्चिम किनार पार गर्नमात्र ३० मिनेट लाग्यो । त्यसपछि बायाँतर्फ लाग्यौँ । हल्काफुल्का पानी प¥यो । खासै रूझिएन ।
अगाडि बढ्दै गर्दा सडक पेटीमा केही पुराना सामानहरु फ्याँकिराखेको दृश्य देखियो । जहाँ जहाँ जे जे देखेँ, त्यहाँ त्यहाँको दृश्य क्यामरामा कैद गरेंँ । ती सामानहरु प्रायः नै काम लाग्ने वा सद्धे नै थिए । त्यसमध्ये एउटा ३२ इन्चको सामसुङ टिभी थियो । टिभीको माथि सेतो कागजमा सूचनासमेत लेखिएको थियो– ‘यो टिभी चालू हालतमा छ, मात्र एउटा स्टेपलाइजर भए पुग्छ ।’ त्यसको साथै कुर्सी, टेबल र अन्य घरायसी सामानहरु थिए । ती फ्याँकिएका सामानहरु उठाएर अपार्टमेन्टमा ल्याउन मन नलागेको होइन । तर के गर्ने ? ती सामानहरु ल्याएर राख्ने ठाउँ नै थिएन । आवश्यकता पनि थिएन ।
अगाडि बढ्दै जाँदा पुनः बाटोछेउको पेटीमा केही घरायसी सामानहरु फ्याँकिएको देखियो । त्यहाँ केही लेखिएको थिएन । तर पनि सामान हेर्दा लाग्दथ्यो, सबै काम चलाउ नै छन् । ती थिए– वासिङ मेसिन, किचन दराज र कोठामा प्रयोग हुने सामानहरु । त्यसपछि तेस्रो ठाउँमा ३ सिटे सोफा, ५ फिटे अग्लो फ्रिज, बारविक्यु मेसिन र किचन दराजहरु थिए । सबै नै प्रयोग गर्न लायक राम्रा सामान थिए । हेर्दा लाग्दथ्यो, सबै सामान प्रयोग भएका तर नबिग्रिएको अवस्थामा छन् ।
नेपालमा भए ती सामानहरु कदापि फ्याँकिने थिएनन् । केही मूल्य घटाएर बिक्री गरिन्थ्यो वा कुनै नजिकका चिनेजानेका मान्छेलाई बोलाएर दिइन्थ्यो । तर, यहाँ त्यस्तो चलन र वातावरण नै छैन । आपूmलाई मन नपरेपछि वा नचाहिएपछि वा काम नलाग्ने भएपछि त्यस्ता सामानहरु सडकको पेटीमा लागेर जतनसाथ राखिदिन्छन् । कुनै देख्ने मानिसलाई काम लाग्ने वा आवश्यक भए उसले उठाएर लैजान पाउँछ । काम नलाग्ने भए त्यहीँ नै रहन्छ र नगरपालिकाको गाडी आएर उठाएर लैजान्छ । तर, यसरी बाटोमा सामान फ्याँक्न पनि निश्चित गते वा बार तोकिएको हुँदोरहेछ । सोही मिति वा दिनमा मात्र सामान फ्याँक्न पाइने रहेछ । थाहा नभए नगरपालिकामा फोन गरेर सोध्नुपर्ने रहेछ र नगरपालिकाको गाडी जहिले आउने दिन परेको हुन्छ त्यही दिनमात्र फाल्न पाइने रहेछ । आफूलाई नचाहिने सामान भन्दैमा जहिले मन लाग्यो त्यो दिन सडक पेटीमा फाल्न पनि नपाइने रहेछ ।
हाम्रोे अपार्टमेन्टको तेस्रो तलामा साउथ अफ्रिकाकी एक जना छात्रा बस्दथिन् । हामी ग्राउन्ड फ्लोरमा बस्दथ्यौँ । उनी बाहिर निस्कँदै गर्दा र ठाकुर (छोरा) बाहिरबाट अपार्टमेन्टमा आउँदै गर्दा दुई जनाको बाटैमा जम्काभेट भयो । त्यति नै बेला उनले ठाकुरलाई जानकारी गराउँदै भनिन्– ‘मैले कोठा छोड्दै छु । मेरो यहाँको अध्ययन सकियो । भोलि बेलुकी छ बजेसम्म कोठामै हुन्छु । मैले केही सामानहरु छोडेर जानुपर्ने भएको छ । तपार्इंलाई कुनै सामान आवश्यक लाग्छ भने लिन आउनुहोला ।’
यस्तो अवस्थामा कतिपय सामानहरु बोकेर लैजान सम्भव नै हुँदैन । कोठामा छाड्न पनि पाइँदैन । अनि, फ्याँक्नैपर्ने अवस्था आउने रहेछ । विदेशको ठाउँमा नचिनेका मानिसलाई बोलाएर यो सामान छ लैजाऊ भनेर कसलाई भन्ने ? यो पनि झन्झट नै हुने रहेछ । कसैलाई कुनै नयाँ मोडलको राम्रो सामान किन्न मन लाग्यो भने पनि आपूmसँग भएको सोही प्रयोजनको पुरानो सामान राम्रो कन्डिसनमा भए पनि फ्याँक्नुको विकल्प नै नबन्दो रहेछ । नेपालमा भए कबाडी संकलक आएर घरघरै चहारेर पुरानो सामान किनेरै लैजाने थियो । त्यसरी फ्याँक्नु पर्दैन थियो । तर, यहाँ घर घर डुलेर कबाडी संकलन गर्ने कार्य कसैले पनि बिल्कुलै गर्दैनन् ।
अब हामी फरक बाटोबाट फर्कदै गर्दा अपार्टमेन्ट नजिकिँदै थियो । बिस्तारै पानी पर्न थाल्यो । बस प्रतीक्षालयमा ओत लाग्यौँ । एकैछिनमा स्याँठ चल्न थाल्यो । अपार्टमेन्ट नपुग्दै एकैछिनमा पानी दर्कियोे । अनि, १५ मिनेटमै पानी बिदा भयो । मौसम पूरै उज्यालियो । भनिन्छ, बच्चाको स्वभावजस्तै हो यहाँको मौसम । बच्चा कतिबेला शान्त हुन्छ, कतिबेला रून्छ, कतिबेला हाँस्छ, कतिबेला खेल्छ कुनै ठेगान हुँदैन । छिनछिनमा मौसम परिवर्तन हुनु पनि यहाँको विशेषता नै मान्नुपर्दछ ।
(१९ सेप्टेम्बर २०१४ साउथ पर्थ : अस्ट्रेलिया ।)